Ahoana ny fomba hanatsarana ny lahatsoratra manaraka amin'ny bilaoginao momba ny fiatraikany lehibe indrindra. | Martech Zone
Iray amin'ireo antony nanoratako ny boky fitorahana bilaogy orinasa folo taona lasa izay dia ny nanampy ny mpijery mampiasa bilaogy ho an'ny marketing amin'ny motera fikarohana. Ny fikarohana dia tsy mitovy amin'ny media hafa satria ny mpampiasa fikarohana dia mampiseho finiavana rehefa mitady vaovao na mikaroka ny fividianana manaraka.
Ny fanatsarana bilaogy sy ny atiny ao anaty lahatsoratra tsirairay dia tsy tsotra toy ny manipy teny fanalahidy fotsiny ao anaty fangaro… misy toro-hevitra sy tetika vitsivitsy azonao ampiasaina hanatsarana ny lahatsoratra sy hampiasanao tanteraka ny lahatsoratra bilaogy rehetra.
Fanatsarana ankapobeny ny pejy rehetra
Hoheveriko fa ny anao ny rafitra fitantanana atiny dia novolavolaina tanteraka, ary ny bilaoginao dia fifadian-kanina ary mamaly ny finday. Ireto misy singa 10 manandanja rehefa mandady sy manisy index ny tranonkalanao ny motera… ary koa ireo singa hahasarika ny mpamaky anao:
Lohateny pejy - Hatreto, ny singa manan-danja indrindra amin'ny pejinao dia ny mari-pamantarana lohateny. Ianaro ny fomba manatsara ny tenifototrao ary hampitomboanao ny laharana sy ny tahan'ny click-through an'ireo bilaoginao ao amin'ny pejy valin'ny motera fikarohana (SERPs). Tehirizo eo ambanin'ny tarehin-tsoratra 70. Aza hadino ny mampiditra famaritana meta mafonja ho an'ny pejy - tarehin-tsoratra 156 latsaka.
Post Slug - ny fizarana URL izay maneho ny hafatrao dia antsoina hoe slug post ary azo ovaina amin'ny ankamaroan'ny sehatra fitorahana bilaogy. Ny fanovana slug mandefa lava kokoa ho slug fohy-teny afovoany fa tsy hoe lava slug post dia mampiakatra ny tahan'ny tsindry avy amin'ny pejy valin'ny motera fikarohana (SERPs) ary hanamora ny fizarana ny atiny. Ny mpampiasa motera fikarohana dia mahazo teny lavitra amin'ny fikarohana azy ireo, koa aza matahotra ny hampiasa ny fomba, inona, iza, aiza, oviana, ary maninona ao amin'ireo slug-nao no manatsara ny slug.
Post Title - Na dia azo hatsaraina ho an'ny karoka aza ny lohatenin'ny pejinao, ny lohateninao amin'ny mari-pamantarana h1 na h2 dia mety ho lohateny mahasarika izay misarika ny saina ary mahasarika tsindry maro kokoa. Amin'ny alàlan'ny fampiasana mari-pamantarana lohateny, dia ampahafantarinao ny motera fikarohana fa ampahany manakiana amin'ny atiny izy io. Ny sehatra fitorahana bilaogy sasany dia manao ny lohatenin'ny pejy sy ny lohateny fandefasana mitovy. Raha misy izy ireo dia tsy manana safidy ianao. Raha tsy izany kosa dia azonao atao ny manararaotra azy roa!
mizara - Ny fahafahan'ny mpitsidika mizara ny atiny dia hahatonga anao mpitsidika betsaka lavitra noho ny mamela azy ho azy. Ny tranonkala sosialy tsirairay avy dia samy manana ny bokotra fizarana ara-tsosialy izay tsy mila dingana na fidirana maromaro… manamora ny fizarana ny atiny ary hizara izany ny mpitsidika. Raha ao amin'ny WordPress ianao, dia afaka mampiasa fitaovana toa azy koa Jetpack hamoaka ho azy ny lahatsoratrao amin'ny fantsona sosialy.
misy sary - sariny iray alina ny sary. Ny fanomezana sary na horonan-tsary amin'ny hafatrao dia mamelona ny saina ary mahatonga ny atiny ho matanjaka kokoa. Rehefa zaraina ny atiny dia zaraina amin'ny azy manerana ny tranonkala sosialy ny sary… safidio am-pahendrena ny sarinao ary ampidiro hatrany ny lahatsoratra hafa miaraka amin'ny famaritana voatsara. Ampiasao ny sary fantsona haino aman-jery tsara sy ny sosialy sahaza ary plugins famahanana hampitombo ny mety hisian'ny olona tsindrio rehefa zaraina.
Content - Tazomy ho fohy araka izay azo atao ny atiny hahitanao ny hevitrao. Mampiasà teboka misy lohateny, lohateny, sora-baventy ary sora-matevina mba hanampiana ny olona hanadino ny atiny ho mora kokoa ary hanampy ny motera fikarohana hahafantatra ireo teny sy fehezanteny tianao hahitana anao. Ianaro ny fomba ampiasao tsara ny teny lakile.
Profil profil - Ny fananana ny mombamomba ny mpanoratra anao dia manohina manokana ny hafatrao. Te hamaky lahatsoratra avy amin'ny olona ny olona… ny tsy fitonona anarana dia tsy mahasoa ny mpijery amin'ny bilaogy. Ary koa, ny anaran'ny mpanoratra dia manangana fahefana sy fizarana ny vaovao. Raha mamaky lahatsoratra mahafinaritra aho dia manaraka matetika ilay olona ao amin'ny Twitter… ary avy eo mamaky atiny fanampiny izay avoakan'izy ireo.
Comments - Manatsara ny atiny ao amin'ny pejy miaraka amin'ny atiny fanampiny mifandraika ny fanehoan-kevitra. Izy ireo koa dia manome fotoana iray ho an'ny mpihaino anao hifaneraserana amin'ny marika na orinasanao. Nilaozanay ny ankamaroan'ny plugins an'ny antoko fahatelo ary nisafidy ny fampiasa amin'ny WordPress default fotsiny izahay - izay tafiditra ao amin'ny fampiharana Mobile-anay, manamora ny famaliana sy ny fankatoavana.
Miantsoa hanao fihetsika - Ankehitriny rehefa manana ny mpamaky ao amin'ny bilaoginao ianao, inona no tianao hataon'izy ireo? Tianao ve izy ireo hisoratra anarana? Misoratra anarana amin'ny fisintomana? Manatreha fampisehoana rindrambaiko iray? Ny fanatsarana ny lahatsoratry ny bilaoginao dia tsy feno raha tsy hoe manana làlan'ny mpamaky ianao hiditra lalindalina kokoa amin'ny orinasanao.
Sokajy sy Tags - Indraindray ny mpitsidika ny motera fikarohana dia tsindrio fa tsy hitany izay tadiaviny. Ny fananana lahatsoratra hafa voatanisa izay mifandraika dia afaka manome fifamatorana lalindalina kokoa amin'ilay mpitsidika ary manalavitra azy ireo mitempo. Manana safidy betsaka ho an'ny mpitsidika hijanona ary handray bebe kokoa! Azonao atao ny manampy an'io amin'ny alàlan'ny fiantohana fa manana sokajy malina ianao, manandrana manendry ny lahatsoratra tsirairay farafaharatsiny. Ho an'ny tag, te-hanao ny mifanohitra amin'izany ianao - manandrana manampy tag ho an'ny teny mitambatra izay mety hitarika ny olona ho amin'ny paositra. Tsy manampy amin'ny SEO ny Tags raha tsy amin'ny fikarohana anatiny sy lahatsoratra mifandraika amin'izany.
Alohan'ny hamoahako ny bilaogy tsirairay
Ny ankamaroan'ireo singa manakiana ireo dia natsangana sy mandeha ho azy miaraka amin'ny fametrahana sy ny fametrahana ny sehatra fitorahana bilaogy anao. Raha vantany vao mandany fotoana amin'ny atiny aho dia mandalo dingana fohy hanatsarana ny lahatsoratro, na dia:
Title - Miezaka mifandray amin'ny mpamaky aho ary mamorona fahatsapana fahalianana hahafahan'izy ireo mikitika. Miresaka mivantana amin'izy ireo miaraka aminao na aminao aho!
Featured Image - Miezaka foana aho mahita sary tsy manam-paharoa sy mahasarika ho an'ilay lahatsoratra. Ny sary dia tokony hanamafy ny hafatra amin'ny fahitana.
Hierarchy - Ny mpitsidika dia manara-maso alohan'ny hamakiany, noho izany dia manandrana mampiasa subheadings aho, lisitra misy bala, lisitra misy isa, citer block ary sary am-pahombiazana hahafahan'izy ireo mandalina ny vaovao ilain'izy ireo.
Post Slug - Miezaka ny hitazona teny ambanin'ny 5 aho ary mifandraika indrindra amin'ny lohahevitra. Manamora ny fizarana izany ary mahasarika kokoa ny rohy.
sary - Matetika aho mitady Youtube amin'ny horonan-tsary matihanina hizarana sy hampiasa sary betsaka araka izay tratrako. Ataoko tsara amin'ny laoniny ny fampiasako ireo sary amin'ny alàlan'ny tady, izay manampy amin'ny fikarohana sary sy fanatsarana ny pejy. Mariho ny sary asongadiko amin'ity lahatsoratra ity blaogy-post-checklist.png.
Links - Miezaka ny mampiditra rohy mankamin'ny lahatsoratra misy ifandraisany ao anaty ny atiny foana aho mba hahafahan'ny mpamaky misavika fampahalalana bebe kokoa.
SOKAJY - Miezaka ny mifantina 1 na 2. Tsy manana lahatsoratra lalina lalindalina kokoa aho fa manandrana mikendry ny kendrena ho lasibatra tokoa.
Tags - Miresaka olona, ​​marika ary anaran'ny vokatra soratako aho. Ho fanampin'izay, hanao fikarohana momba ny fitambaran'ny teny lakile mety ampiasain'ny olona hikaroka ilay lahatsoratra aho.
Meta Description - Ity famaritana kely eo ambanin'ny lohateny sy ny rohy mankany amin'ny hafatrao amin'ny pejy valin'ny motera fikarohana ity dia azo fehezina a meta description. Makà fotoana ary manorata famaritana tena mahaliana izay mitarika ny fahalianana ary lazao amin'ny mpampiasa fikarohana ny antony tokony hanindriana ny lahatsoratrao.
Fitsipi-pitenenana sy tsipelina - Vitsy ny lahatsoratra avoakako fa tsy mihifikifi-doha aho rehefa mamaky andro taty aoriana na mahazo valin-teny avy amin'ny mpamaky momba ny hadalàna fitsipi-pitenenana na tsipelina nataoko. Miezaka manamarina ny lahatsoratra tsirairay aho Grammarly hanavotra ny tenako… tokony ianao koa!
Aorian'ny famoahana ny bilaogy tsirairay avy
Promotion - Azoko antoka fa hampiroborobo ireo lahatsoratra Manoratra isaky ny fantsona sy isaky ny manararaotra aho, manokana ny fomba fijeriko mialoha sy fanamarihana ireo olona, ​​tenifototra na tranokala lazaiko.
Fitaovana toy ny Agorapulse dia mety ho mora ampiasaina handaminana mora foana ny fampiroboroboana ny lahatsoratra tsirairay. Ny lahatsoratra sasany dia malaza tokoa ka mandahatra bitsika isam-bolana aho, fanambarana momba ny hetsika ataoko mandra-pahatongan'ny hetsika iray, ary lahatsoratra hafa averiko indray mandeha isaky ny misy dikany. Fitaovana tsy mampino izay manamora ny fiainako izany. Ity misy ohatrinona no ahafahany miditra amin'ny haino aman-jery sosialy… isam-bolana:
Disclosure: Ambasadaoro marika reharehan'ny Agorapulse aho!
Ireto misy lahatsoratra mifandraika amin'ny fanatsarana izay afaka manampy anao:
Ahoana ny fanatsarana ny fiantsonana Pages
Ahoana ny fampiasana Keywords amim-pahombiazana
Ahoana ny fanatsarana pejy iray Fikarohana eo an-toerana
Ahoana ny fanatsarana a Youtube Video
Ahoana ny fanatsarana ny Title Tags
Tags: profesora mpanoratrabilaogyfanatsarana ny lahatsoratra bilaogySokajySokajylisitraContent Marketingsary asongadinaahoana nony fomba hanatsarana ny lahatsoratra bilaogysaryanatiny mifandrayfampiasana teny lakileOptimizationmanatsara ny lahatsoratra bilaogylohatenin'ny pejymandefa slugthumbnaillohatenyfizaranaSocial Media Marketingfizarana sosialytagginghoronan-tsaryYouTube
Oct 24, 2012 amin'ny 4: 38 AM
Misaotra ny fizarana! 😉
Ny asa famolavolana
Dec 23, 2012 ao amin'ny 2: PM PM
torohevitra tena mahasoa ireo.
1 Mey 2013 tamin'ny 12:13 hariva
MISAOTRA anao noho ity fampahalalana tena lehibe momba ny Tags isan-karazany ity sy ny tanjon'ny tsirairay avy amin'ny sokajy tag tsirairay. Nanadio ny eritreritro "rahona" betsaka momba ny olan'ny tag ianao.